'सुशान्त दुनियाँबाट जानु राम्रो लागेन' भन्दै युवतीले गरिन् आत्महत्या शुक्रवार, श्रावण ९, २०७७
राजेश हमालले भने-दीपाश्रीलाई माफ गरिदिनुस् बुधवार, असार ३१, २०७७
फिल्म ‘लकडाउन’ सार्वजनिक (भिडियो) शुक्रवार, असार २६, २०७७
योगराजले ल्याए 'तीज प्रवचन' बुटवल-प्राध्यापक तथा गायक योगराज पोखरेलले हिन्दू नारीहरुको बिशेष पर्व हरितालिका तीजको अवसर पारेर "तीज प्रवचन" सार्वजनिक गरेका छन्। बुटवल बहुमुखी क्याम्पस रसायन शास्त्रको प्राध्यापक समेत रहेका पोखरेलले बिशेष गरेर तीज पर्वको महत्व, अतित र वर्तमानलाई प्रवचन शैलीमा ल्याएका हुन्। शुक्रवार, असार २६, २०७७
मेलिना र गणेशले ल्याए “चरी चुच्चे च” (भिडियो) काठमाडौं-गायिका मेलिना राई र गणेश खड्काको स्वरमा रहेको गीत “चरी चुच्चे च” को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । आइतवार, असार २१, २०७७
गायक दुर्गेश थापाले ल्याए ‘बीच्च बीच्चमा २’ (भिडियो) गायक दुर्गेश थापाले नयाँ तीजको गीत बजारमा ल्याएका छन् । उनले युट्युबमार्फत ‘बीचबीचमा २’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । गतवर्ष दुर्गेशले ‘हामी पनि नाच्नुपर्छ बीचबीचमा’ बोलको गीतमा सार्वजनिक गरेर वर्षभरि नै चर्चा कमाएका थिए । उक्त गीत सामाजिक सञ्जालमा पनि खुबै चर्चित बनेको थियो । यसपटकको गीत भने केही फरक छ । कोरोनाका कारण यसपालिको तीजमा पहिलेको जस्तो रमझम नभएको भावलाई दुर्गेशले गीतमा प्रस्तुत गरेका छन् । आइतवार, असार २१, २०७७
जसले महिला, बालबालिकाको पक्षमा निःशुल्क वकालत गर्छिन् बुटवल-‘स्वघोषित शत्रुहरुसँग डिफेन्स गर्न यत्तिको आत्मविश्वासी मुस्कानबाहेक अरु केही चाहिएला ?’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रुकुम जिल्ला अदालत अगाडि खिचिएको फोटोसँगै लक्ष्मी नानी थापाले लेखेको स्टाटस हो यो । स्टाटसबारे लुम्बिनी टाइम्ससँगको कुराकानीमा उनले सामान्य प्रतिक्रिया दिइन्–‘कसैप्रति लक्षित होइन ।’ आइतवार, असार १४, २०७७
मिस नेपाल २०२० को आवेदन खुला, कहाँ कहाँ हुँदैछ अडिसन ? काठमाडौं – मिस नेपाल २०२० को आवेदन खुला गरिएको छ । हिडन टिजरले हरेक वर्ष गर्दै आएको मिस नेपाल २०२० का लागि सोमबारबाट आवदेन खुला गरिएको हो । मंगलवार, फाल्गुन १३, २०७६
प्रेमबारे प्रदीप गिरी र राम कार्की : आइ लभ यू भन्दा पूँजीवाद ! घर परिवारमा समाजवाद र पूँजीवादको व्याख्या गर्दै भने–‘तपाईको जोडीले आइ लभ यु मात्र अर्थात म प्रेम गर्छु मात्र भन्छन भने त्यो पूँजीवाद हो। आइ रेक्स्पेक्ट यु पनि भन्छन् भने त्यो समाजवाद हो। महिला साथीहरु बुझिराख्नुस्।’ बिहिवार, फाल्गुन ८, २०७६
ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे ! बुटवल– भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रणय दिवस शुक्रबारनेपालसहित विश्वभर मनाईंदै छ। हरेक वर्ष फेब्रुअरी १४ मा विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ। शुक्रवार, फाल्गुन २, २०७६
कस्तो प्रेमसम्बन्ध : वासनायुक्त कि निस्वार्थी प्रेम, एक अनुभूति हो । प्रेमको कुनै रुप हुँदैन । रंग हुँदैन । तरपनि प्रेम एकनास हुँदैन । भनिन्छ, प्रेम थरीथरीका हुन्छन् । कुनै नवजवान युवायुवतीबीचको प्रेममा आ-आफ्नै उदेश्य र स्वार्थ जोडिएका हुन्छन् । आमा र बच्चाबीचको प्रेम भिन्न हुन्छ । साथी-साथीबीच हुने प्रेम भिन्न हुन्छ । तौर-तरिका पनि फरक हुन्छ । प्रेम व्यक्त गर्ने शैली फरक हुन्छ । यस्ता अनेक विविधता हुन्छ, प्रेममा । बिहिवार, फाल्गुन १, २०७६
प्रेमका ११ प्रतीक, जो आफ्ना प्रियतमको नाममा बनाइए प्रेमका नाममा संसारभर विभिन्न स्मारक बनाइएका छन्। ती स्मारकले हामीलाई तिनका निर्माताको प्रेमकथा सम्झाउँछन् र प्रेमप्रतिको विश्वासलाई अझ दृढ पार्न सघाउँछन्। बुधवार, माघ २९, २०७६
आइ लभ यू नभनी लभ प्रपोज गर्ने आइडिया हुन त प्रेम अभिब्यक्त गर्नका लागि ‘आइ लभ यू’अर्थात म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्नु जति प्रभावकारी केही पनि हुँदैन । यो साधारण तर सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो । यो पुरानो जमाना देखि चलेको भाषा र तरिका पनि हो । तर जमाना बदलिँदै जाँदा ‘आइ लभ यू’ को अर्थ भन्दा अझै फरक भाषामा मानिसहरु प्रेम ब्यक्त गर्न मन पराउन थालेका छन् । मंगलवार, माघ २८, २०७६
गायिका आस्था राउत ४ हजार धरौटीमा रिहा काठमाडौं । प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा ‘अभद्र व्यवहार’को मुद्दा खेपेकी गायिका आस्था राउत छुटेकी छन् । मंगलवार, माघ १४, २०७६
आत्महत्याको खबर यी नायिकामाथि पर्‍यो भारी: श्रद्धाञ्जली दिनेहरुलाई भनिन्, -‘म अझैं जिउँदो छु’ उनको मृत्युको खबर सुन्ने बित्तिकै प्रशंसक दुखी भए र इन्स्टाग्राममा उनको नामले बनेको अकाउन्टमा कमेन्ट गर्न थाले । मंगलवार, माघ १४, २०७६
रेड कार्पेटमा छाए प्रियंका र निक, भाइरल भयो तस्वीर पछिल्लो समय प्रियंका चोपडा हलिउडमा व्यस्त छिन् । सोमवार, माघ १३, २०७६